Muuqaalka ugufiican ee argaggixisada adag.
Château Fonplégade wuxuu matalaa muuqaalka ugu fiican uguna caansan ee argagaxisena. Waxaa lagu kobciyay mosaic carra wanaagsan ah iyo kala duwanaansho cajiib ah oo juqraafi iyo juqraafi ahaan, canabkayagii wuxuu u qaybsan yahay 27 baloog oo ku yaal 45.5 acres. Baloogyada gacantu-gacmeedku waxay ka kooban yihiin sawir gacmeedka farshaxanka ee argaggixisadeena, iyagoo bixinaya waxyaabo badan oo ka kooban dhadhan loogu talagalay horumarka kooxdeena.
Iyada oo dheelitir aan la qiyaasi karin ka dhexeeyo miro, kakanaanta iyo dhererka udgoon, khamrigan waxaa lagu gartaa macdanta casriga ah, oo joogto ah sanad ilaa sanadka, oo leh dhir jilicsan oo macaan iyo jilicsanaan jilicsan. Waxay ka samaysan tahay geedaha waaween ee ugu da'da weyn, oo si aad ah loogu farsameeyay iyada oo la adeegsanayo tababbarka dabiiciga ah iyo noolaha si loo soo saaro tayada ugu fiican koox kasta. Si weyn ayaa loo yaqaan 'Merlot', isku daridda waxaa ku jira oo keliya Cabernet Franc ku filan oo khamriga la jaan qaada qaab dhismeed qurux leh.
Château Fonplégade waa da '16-20 bilood 60% 30 foosto oo cusub oo Faransiis ah, 1% dhallaanka faransiiska oak jir ah oo jira 10 sano jir iyo XNUMX% maraakiibta la taaban karo ee ukunta u eg.
Qiyaasta qaan gaadhnimada
5 in 20 sano
"Markaan joogno Château Fonplégade, waxaan ku faan nahay in aan ka mid nahay hormuudyada noolaha dabiiciga ah ee Bangiga Halyeeyga ah ee Bordeaux. Waxaan dareemeynaa inay tahay mudnaanteena iyo masuuliyadeena in aan noqono wakiillo ilaaliya dhulkan qaaliga ah si loo ilaaliyo jiilalka soo socda" . - Denise Adams, Mulkiile
Waxaan helnay shahaadadayada dabiiciga ah ee beeraha sanadkii 2013, kadib hannaan adag oo qiimeyn seddex sano ah, natiijaduna waxay nagu dhiiri galisay inaan raadino shahaadada biodynamic. Iyadoo la raacayo hagida lataliyeheena sharafta leh ee Corne Comme, waxaan uqaadaneynaa dhaqamadeena beerashada heerkii ugu sareeyay. Adoo ku dhaqma kala duwanaanta kala duwanaanshaha dhismaha iyo qaadashada habka guud ee beeraha, waxaan ka wada shaqeyneynaa sidii aan u sare u qaadi lahayn tayada khamrigeenna heerarkeeda ugu sarreeya. Ilaa tan laga gaaro, hantideena waxay siisaa hoy marti soor oo kaliya canabka canabka, laakiin idaha, digaagga iyo shinnida malabka.